सी जिनपिङको भोजमा श्वेता – Khabar Silo
दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सम्मानमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोल्टी होटलमा ‘स्टेट डिनर’ आयोजना गरिन्। त्यो भोजमा गिनेचुनेका नेताले पनि निम्तो पाएनन्। यस्तोमा कलाकारको उपस्थिति नहुनु सामान्य नै हो। तर सीको भोजमा केही नेता छुटे पनि कलाकार देखिए है ! कलाकारको प्रतिनिधित्व गरेको देखियो अभिनेत्री श्वेता खड्काले।
श्वेतालाई स्टेट डिनरमा निम्ता आएपछि उनले स्वागत कार्डसहितको तस्बिर फेसबुकमा पोट्याइन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सहभागी हुने डिनरका लागि उनी गुलाबी रङको साडीमा पुगिन्।
उनले रात्रीभोजमा सहभागी हुन जाँदाका तस्बिर सार्वजनिक पनि गरिन्। तस्बिरमा श्वेताको उत्साह मज्जाले देखिन्छ। यति महत्वपूर्ण कार्यक्रममा निम्तालु हुन पाउँदा को खुसी हुँदैन र !
यसपालि दसैंमा भने उनी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हातबाट टीका लगाउँदै गरेको देखियो। लाइनमै बसेर उनले ज्ञानेन्द्रबाट दसैंमा आशीष थापिन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हातबाट टीका थाप्दा उनी निकै हर्षित देखिएकी थिइन्।
ज्ञानेन्द्रको हातबाट टीका लगाउँदै गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दै लेखिन् ‘राजा’। कुनै समय ठिकठिकै चलेको शुष्माको करिअर अहिले रिटायर्डझैँ भइसक्यो अर्थात् पूर्व अभिनेत्री समान। पूर्व अभिनेत्रीमा पलाएको पूर्व राजाको सम्मान हेर्न लायक हुने नै भयो।
संविधान दिवसको उत्सवले जनतालाई किन छोएन, अब खोजी गर्नुपर्छ : रेवतीरमण भण्डारी [भिडियो]
काठमाडौं– संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयनका धेरै कानुन बनेका छन्। तर सर्वसाधारण जनताले भने संविधानले गरेका व्यस्थाको फाइदा पाउन सकेका छैनन्। संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकहरु जनताले निर्बाध रुपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत हक जनताले नि:शुल्क पाउने परिकल्पना संविधानले गरे पनि त्यसमा उनीहरुले अपनत्व महसुस […]
स्कुल नखुले पनि यो बर्षको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन थालियो यस्तो तयारी
Posted on August 17, 2020 Author khabar silo
काठमाडौँ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको भार घटाएर भए पनि विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गृहकार्यमा सरकार जुटेको छ । शैक्षिक सत्र खेर जाँदा विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने, सरकारको वैकल्पिक शिक्षामा गरिएको लगानी पनि खेर गई समग्र विद्यालय शिक्षामा नै दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्लेषणपछि सरकार शैक्षिक सत्र सदुपयोग गर्ने तयारीमा जुटेको हो । […]
राजु लामाले भन्छन ‘बिहे नगरी भा’छैन’
काठमाडौं – गायक राजु लामाको आवाज रहेको गीत ‘बिहे नगरी भा’छैन’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतको भिडियो ओएसआर डिजिटलको आधिकारिक युट्युबमा च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा बिहे गर्नुपर्ने अवस्था आएको एक युवकको भावना समेटिएको छ । यस्तै गीतमा राजु लामा (मंगोलियन हर्ट) को आवाज तथा आरबी लामाको लय र संगीत सुन्न सकिन्छ […]
गरिबलाइ एक रुपैया नछाड्ने सरकार एनसेलले अर्बौ ठग्दा किन बोल्दैनन् ?
बिहानै मनकामन मन्दिरको दर्शन गरि तपाइको आजको राशिफल हेर्नुहोस
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, कार्तिक २ गते मगंलबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल
दोस्रो हाफपछि भारतसँग पराजित हुनुको कारण यस्तो भन्छन् कप्तान चेम्जोङ